गण्डकीमा मुख्यमन्त्री गुरुङलाई हाइसन्चो, के गदै छ प्रचण्ड–माधव समूह ? – Kendra Khabar
गण्डकीमा मुख्यमन्त्री गुरुङलाई हाइसन्चो, के गदै छ प्रचण्ड–माधव समूह ?
२०७७, १२ पुष आईतवार ०८:५४
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) विभाजनको संघारमा पुगे पछि प्रदेशमा पनि त्यसको असर देखिएको छ ।
केपी शर्मा ओली र प्रचण्ड–माधव दुई समुहमा नेकपा विभाजन भएको छ । ओली समूहमा रहेको प्रदेश सरकार विरुद्ध प्रचण्ड नेपाल समूहले अविस्वासको प्रस्ताव अगाडी बढाएका छन् ।
वागमती प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविस्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ, भने प्रदेश एकमा पनि हस्ताक्षर संकलन भइरहेको छ ।
गण्डकी प्रदेशमा दुई समूहका भेला निरन्तर चलिरहेका छन् ।
तर, गण्डकी प्रदेश सरकार ढाल्ने खेल भने देखिएको छैन । प्रचण्ड–माधव समूहले सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता मनस्थिति अहिलेसम्म देखिएको छैन । दुईतिहाई बहुमत सहित ओली समूहका पृथ्वी सुब्वा गुरुङ मुख्यमन्त्री छन् ।
ओली नेतृत्वमा रहेका सरकार ढाल्ने प्रचण्ड–माधव समूहको रणनिति भए पनि प्रदेश सभाको अंकगणीले उक्त समूह अगाडी बढ्न नसकेको बताइन्छ ।
शनिबार बसेको उक्त समूहको गण्डकी प्रदेशस्तरीय बैठकले समेत यसबारे केही निर्णय गरेको छैन । यसको कारण हो, प्रचण्ड–माधव समूहसँग अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पुग्ने संख्या नै नहुनु ।
६० सदस्यीय प्रदेशसभामा प्रचण्ड पक्षका १२ र माधव नेपाल पक्षका एक जना सांसद छन् । जबकी अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउन एक चौथाई अर्थात १५ सांसद आवश्यक पर्छ । त्यसैले प्रचण्ड–नेपाल समूह अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने अवस्थामा छैन ।
मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पनि संघमा जे भए पनि प्रदेशमा मिलेर सरकार चलाउन चाहेको सार्वजनिक भएको थियो । किनकी ओली समूहसँग पनि सरकार टिकाउन बहुमत पुग्देन । प्रदेशसभा अ‍ेली समूहका २७ सांसद छन्, सरकार टिकाउन ३१ सांसद चाहिन्छ ।
काँग्रेसका १५, राष्ट्रिय जनमोर्चाका ३ र जनता समाजवादीका २ सांसद प्रदेश सभामा छन् । कांग्रेस सहितका साना पार्टीको अडानले नयाँ समिकरण बन्न सक्छ । तर ती दल अहिलेसम्म कसको पक्षमा लाग्ने भनेर खुलेका छैनन् ।
त्यसैले अब गण्डकी प्रदेशसभामा सरकार टिकाउन वा ढाल्न साना दलको भूमिका महत्वपूर्ण हुने देखिएको छ ।
मुख्यमन्त्री गुरुङले प्रचण्ड–माधव समूहका मन्त्रीको राजीनामा माग गरेका छैन् भने मन्त्रीले पनि राजिनामा गर्ने मनस्थितिमा देखिदैनन् ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले ओली समूहले राजीनामा नमागेको र आफूहरुले पनि राजीनामा दिने नसोचेको उनले बताए ।